Porn စွဲသူများကိုနားလည်ခြင်းနော Church ဘုရားကျောင်းနှင့်အင်တာဗျူး (အပိုင်း ၃) - Porn On Your Brain
Porn စွဲနားလည်ခြင်း: နောဧသည်ဘုရားကျောင်း (အပိုင်း 3) နဲ့အင်တာဗျူး
နောဧသည်ဘုရားကျောင်း porn စွဲနှင့်ရေးသားသူနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦးလူသိများတဲ့ပီဖြစ်ပါတယ် Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုသာသက်ရောက်သည်ဘယ်လိုမှာပညာရေးဆိုင်ရာကြည့်။ ထို့အပြင်သူသည်က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးထားပြီး, အင်တာနက်က Porn စွဲ။ ဤ site တွင်သူသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်း-ဆောင်းပါးများ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူသူ၏ကိုယ်ပိုင်ထံမှသင်ယူသတင်းအချက်အလက်နှင့်အခြားသူများကို '' အတွေ့အကြုံများကိုစုစည်းထားသည်။ သူလည်းတဦးတည်း-to-တဦးတည်းရုန်းကန်နေကြသောသူတို့အဘို့နည်းပြအလုပ်ကိုပေးထားပါတယ်။ မကြာသေးမီက နော my သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်၊ ချစ်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှု ၁၀၁ podcast တွင် cast ည့်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကအရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွက်နော with နဲ့အတူမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်။
ဒီအင်တာဗျူးထဲမှာတတိယနှင့်နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ တွင် အပိုင်း 1, နောဧနှင့်ငါ porn စွဲ-ဘယ်လိုစတင်ခဲ့ကြောင့်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ဘယ်လောက်, အသူကြုံတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အခြားအကျိုးဆက်များနဲ့သူ့ရဲ့ Pre-ပြန်လည်နာလန်ထူအတွေ့အကြုံကိုဆွေးနွေးကြသည်။ တွင် အပိုင်း 2ကျနော်တို့နာလန်ထူစသည်သူ၏ခရီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာအပိုင်း3အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုထဲမှာမြင်ရတဲ့အမျိုးမျိုးသော porn-အလွဲသုံးစားလုပ်လူဦးရေဆွေးနွေးရန်နှင့်တစ်စပီကာများနှင့်နည်းပြအဖြစ်နောဧရဲ့အလုပ်။
ဒီအင်တာဗျူးအပိုင်း 1 ခုနှစ်တွင်, သင်ထားတဲ့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာလိင်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့်9သို့မဟုတ် 10 န်းကျင်ကြောင့်တစ်နေရာရာကိုသင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက်အွန်လိုင်းရှာဖွေနေစတင်ခဲ့သည်။ သငျသညျကိုစူးစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့သူပဲဆိဖြစ်လျှင်ဤအအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေခဲ့သည်, ဒါမှမဟုတ်ကြစေခြင်းငှါအချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုရှိခဲ့ပါလျှင်ကျွန်မအံ့သြတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုတော်တော်လေးလွယ်ကူသည်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမပါပဲ။ ငါထကြီးထွားလာနေတဲ့ကြီးမြတ်မိသားစု, ဘေးဖယ်ညစ်ညမ်းနဲ့ငါ့ပြဿနာတွေကနေတစ်ဦးအလွန်ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကလေးဘဝရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်လမ်းအတွက်အလွဲသုံးစားလုပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။
ငါကလူအများကြီးကိုသူတို့ကယ့်ကိုလှည့်ပတ်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အထိတစ်ဦးလိင် drive ကိုဖွံ့ဖြိုး, ဒါပေမယ့်သူတို့မတိုင်ခင်ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြသည်လူတွေကိုသတိပွုမိစတင်ခဲ့ကြောင်းမပြုခဲ့ဟုပြောထင်ပါတယ်။ ငါငါဘယ်လောက်င်ပုံပါဘဲ။ ငါ့အဘို့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုအစဉ်အမြဲငါ့အသက်ကိုတစ်ပစ္စုပ္ပန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ ငါ masturbate သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတွေသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတွေအကြောင်းကို fantasize မပြုခဲ့သည့်အခါအချိန်ကိုမှတ်မိကြပါဘူး။ ကိုယ့်ငါ့ဦးခေါင်းအတွက်စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းတချို့ဓါတ်ပုံတွေကိုရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ထိုအရပ်မှကစွဲဖြစ်လာခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်မည်သည့်တိကျသောစိတ်ဒဏ်ရာအတွက်အမြစ်တွယ်ဘူး။ ငါ့အဘို့ကဒီလိုအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေအကြောင်းအရာများ၏လွယ်ကူပြီးန့်အသတ်ရရှိနိုင်မှုပိုမိုဆက်စပ်ပါတယ်။
ဒါကကျွန်မမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ခဲ့တယ်အကြောင်းရင်းတွေထဲကပါပဲ။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့သူကတခြားကုသတွေအများကြီးနှင့်ပြောဆိုသောင့်ကိုအများဆုံးနှစ်ခုကွဲပြား porn-သုံးပြီးလူဦးရေကိုမြင်လျှင်နေကြသည်။ ပထမဦးစွာပုံမှန်စိတ်ဒဏ်ရာ-based, စိတ်ဒဏ်ရာ-မောင်းနှင်စှဲလမျးသူလည်းမရှိ။ ပြီးတော့အစောပိုင်း porn တွေ့စှဲတယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သမိုင်းကြောင်းအစွဲထဲမှာတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှစိတ်ဒဏ်ရာမဆိုရှိသည်ပါဘူးသူစှဲလမျးသူလည်းမရှိ။ အကျိုးဆက်များတော်တော်များများတူညီသော်လည်း, (ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းတည်တတ်၏တစ်ချိန်က) ကိုအခြေခံအကြောင်းတရားများဒါကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်အနာမှလမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။
yeah, သင်တို့ကိုငါမှန်ကန်သောင်ထင်ပါတယ်။ ငါစိတ်ဒဏ်ရာရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ငါ့ porn အသုံးပြုမှုကိုလုံးဝငါ့ကိုအထီးကျန်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါမိန်းကလေးရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်နေဆဲ, ကကျိန်းသေလိင်နှင့်နွေးထွေးမှုကိုခံစားဖို့ငါ့အနိုင်စွမ်းကိုခိုးလေ၏။ ထိုအနှိုကျတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာငါ့ကိုနှောင့်အယှက်များနှင့်ကငါ့ကိုနာကျင်မှုတွေအများကြီးစေ၏။ ဒါပေမယ့်အစပိုင်းမှာ porn သုံးစွဲဖို့, ဒါမှမဟုတ်ပင်လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်အသုံးပြုငါ့ကိုဦးဆောင်သောအရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။
yeah, အစအဦးမှာငါတကယ်ကသို့လှည့်မယ်လို့အဘယ်အရာကိုမသိခဲ့ပါ။ ကိုယ့်အလားတူအမှုအရာနှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့ကြသူအထွက်ရှိယောက်ျားတွေကိုကူညီမယ့်တကယ်ခိုင်မာတဲ့ drive ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ငါ 18 အခါတစ်ခုလုံးကိုအတှေ့အကွုံအဆိုးဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသောကြောင့်, ငါ့အဘို့, ကြီးနှင့်ဘာမှမရှာဖွေမတွေ့ရှိအဖြေတွေကိုနှင့်မရှာဖွေနေ။ ငါအတူတူအတွေ့အကြုံရှိသည်ဤအရာများကိုတွေ့ကြုံခဲ့ကြသူမလိုချင်ခဲ့ပေ။
ငါငါတတျနိုငျသသမျှလမ်းအတွက်လေ့လာသင်ယူချင်ပါတယ်သတင်းအချက်အလက်များဝေမျှချင်ခဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့စာအုပ်ရေးသားခြင်းအားဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး, Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ။ ထိုအခါငါတစ်စတင် ယူကျု့ချန်နယ် ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ကြောင်း, ငါသည်လည်းနှစ်ဦးစလုံးလူသိရှင်ကြားနှင့်အမည်မသိလူရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေကြားစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ကြောင်းသို့လှည့် AddictedToInternetPorn.comငါဆောင်းပါးများကိုရေးရန်နှင့်ဗီဒီယိုများနှင့် podcasts တွေကိုငါအခမဲ့ဖြန့်ချိခြင်း, ငါသည်ငါ့နည်းပြအလေ့အကျင့်ပြုပါရှိရာထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဘယ်မှာ။ ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလမ်းညွှန်မှုရဖို့လိုသူမည်သူမဆိုသည်ငါနှင့်အတူတစျခု-on-တဦးတည်းပေးဆောင်အစည်းအဝေးများအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တက်ခြုံမီ, အထွေထွေလမ်းအတွက်, သင်သည်အဘယ်သို့ porn စွဲနှင့်အတူရုန်းကန်နေကြသူထွက်အဲဒီမှာလူပြောချင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ရုန်းကန်နေကြသောသူတို့အဘို့, သင်တို့ကိုငါတစျယောကျတညျးမဟုတျပါလို့ပြောလိုပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်မည်သို့ခံစားရလိုက်တယ်သို့မဟုတ်အထီးကျန်, အလွန်ဆင်တူအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူထွက်ရှိများစွာသောလူရှိပါတယ်။ ထိုသို့ဖွင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအလွန်ကိုမကြာခဏအစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြောင်းပြောဆိုကြောင်းအရာတစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဟေ့, ငါ porn စှဲလမျးသူပေါ့ "ပြောပါတယ်တဲ့တီရှပ်ဝတ်ဆင်ထားန်းကျင်မသွားကြပါဘူး။ ငါ။ အိပ်ခန်းထဲမှာလိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ဘူး "ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးရှိသူများအတွေ့အကြုံများရှိသည်သောသူထွက်အဲဒီမှာရှိပါတယ်။ နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတစ်လမ်းကြောင်းကိုလုံးဝရှိပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝသင်တို့အဘို့ပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျနောက်ကွယ်မှ porn ထားခဲ့နိုင်သည်။ သင့်ထံမှအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်း, reverse, နာတာရှည် porn အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပါအဝင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောရောဂါလက္ခဏာများစွာကိုနိုင်ပါတယ်။ porn အမြဲထွက်နှင့်နေ့၌သင်တို့အားငါတစ်နေ့မှာ nags ကြောင်းအရာတစ်ခုခု, သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ကျန်တစ်လျှောက်လုံး inexhaustibly တိုက်ဖျက်ဖို့ရှိသည်သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်မရှိပါ။ ဘဝကပိုကောင်းရပါဘူး။
သူကပြောပါတယ်, သင်အမြဲ, အားနည်းချက်၏အချိန်များတွင်, ထိုတတ်ပြီးခံစားရတယ်, ဒါမှမဟုတ် porn ကိုကြည့်ဖို့သွေးဆောင်မှုရှိပေလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ကြာကြာသင်သည်ကွာညစ်ညမ်းနေ, သင် compulsive အပြုအမူကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝေးကွာသောပိုလွယ်ကူကရရှိသွားတဲ့။
ငါသည်လည်းကျွန်တော်အထငျမှားရှိသည်ဖို့လေ့ရှိသောကြောင့် porn စွဲရုံတစ်ယောက်ျားရဲ့ပြဿနာကိုမပေးကြောင်းပြောချင်တာပါ။ ပို. ပို. ယခုအထူးသဖြင့်ကြောင့်ထိုသို့ပြုပုံကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်၏, အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူယောက်ျားအဖြစ်စွဲလမ်းသဘောထားတွေ၏တူညီသောအမြိုးမြိုးဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။ ထိုသူတို့ကလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု-မဟုတ်လိင်ပျော်မွေ့သို့မဟုတ်တစ်ဖက်နှင့်အတူအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်အော်ဂဇင်ရှိသည်ဖို့ညစ်ညမ်း, တုန်ခါခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်နေကြုံနေရပါတယ်။
သငျသညျအထဲကရှိနှင့်ဤအမျိုးသမီးများ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏လျှင်, သင်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ အဆိုပါစွဲလမ်းသံသရာသို့လဲသေကြပြီတဲ့သူထွက်အဲဒီမှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ထိုသို့လူတို့သညျအဘို့အဖြစ်မိန်းမတို့အဘို့တူညီင်: သင်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြကြောင်း, ဤအမှုအရာ reverse နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျနောက်ကွယ်မှညစ်ညမ်းစွန့်ခွာနှင့်သင်ချင်သောလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေး၏မျိုးကိုပြန်ရနိုင်သည်။
2010 ခုနှစ်ကတည်းက လူငယ်အမျိုးသား လိင်စိတ်အား အကဲဖြတ်သည့် လေ့လာမှုအားလုံးသည် သမိုင်းဝင် လိင်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းမှု အဆင့်ကို အစီရင်ခံပြီး ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ... t.co/vaqjJrpUAQ